Sidee Soomaalida Nairobi u arkaan dib u dhigista dacwada badda? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Sidee Soomaalida Nairobi u arkaan dib u dhigista dacwada badda?
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), oo ka hadlay go’aan kasoo baxay maxkamadda caddaaladda caalamiga ah ( ICJ) ayaa sheegay in dowladdu ay ku qasbantahay inay u hoggaansanto amarka dib-u-dhigista ee kasoo baxay maxkamadda.
Previous articleDadka ka adeeganaya Suuqa Bakaaraha oo lagu dhaliilay arin halis ku ah shacabka Muqdisho
Next articleMuxuu Imaaraadka Carabta u sharaystay midnimada SOOMAALIYA? (WArbixin)
Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed: &Geeska Afrikada Cusub wuxuu mustaqbalka yeelan doonaa Hal Madaxweyne…
SAWIRO: Guddoonka baarlamaanka oo qaabilay Wafdi ka socda EU Maxaa kamid ah waax yabaha ay kawada hadlen?
Madaxweyne Donald Trump oo laga badbaadiyay halis aad u weyn
XOG”Shirkii uu iclaamiyay Madaxweyne Farmaajo oo markale baaqday
Madaxweynaha Kenya oo Saldhigga ciidamada cirka ee ugu weyn Kenya ka furay Gaarisa
DAAWO:Hooyadii arinta murugada badneyd kashaacisay wiilkeeda oo Qatar loo qaatay oo maanta warbaahinta kula hadashay waji kale